Carraddu Nabad Bay Rabtaa Codkaagana Xor baad u tahay | Somaliland.Org
Carraddu Nabad Bay Rabtaa Codkaagana Xor baad u tahay
November 26, 2012	Shacbiga Somaliland waxa ay maalinta Arbacada ee toddobaadkan u codeynayaan doorashadii labaad ee goleyaasha degaanka degmooyinka Somaliland.
Doorashadani sida oo kale waa doorashadii shanaad ee si nabadgelyo ah uga dhacda dhulka Somaliland tan iyo intii ay madaxbanaanideeda la soo noqotay Jamhuuriyadda Somaliland.
Doorashooyinkaasi isdabayaalay waxa aynu caalamka kaga helay magac iyo sumcad weyn oo ilaa maantadan laynagu tixgeliyo sababtuna waxa ay tahay innaga oo ku codaynay nabadgelyo iyo degganaansho iyo sida oo kale doorashooyinkaasi oo ahaa kuwo u dhacay si xor iyo xalaal ah oo caalamkuna ka marqaati kacay.
Doorashadani waxa ay leedahay laba ujeeddo mid weeye waxaa ku soo baxaya xildhibaanadii innagu matali lahaa goleyaasha deegaanada degmooyinka dalka oo dhan, kuwaasi oo loo baahan yahay in aynu ku doorano xildhibaano waddaniyad iyo leh waxqabad oo aynaan ku dooran qabyaalad iyo nin jeclaysi.
Ujeedada labaad ee doorashadani u leedahay muhiimadda gaar ah, waxa ay tahay iyada oo ah laba doorasho oo isbarkan. Taas oo ah
Waxa aynu ku kala dooranaynaa toddobada urur ee u tartamaya kuwii noqon lahaa saddexda xisbi qaran ee dastuurku jideeyay tobanka sano ee soo socda.
Sidaa awgeed ayaa doorashadani u noqotay mid muhiimad weyn leh, dhinaca kalena leh culayskeeda oo u baahan taxadir badan iyo u diyaargarow.
Doorashadan aynu maanta u taaganahay oo ah doorashadii shanaad ee aynu galno, waxaa innagu waajib ah in aynu u wada guntano sidii aynu ugu codayn lahayn sidii caadada inoo ahayd si nabadgelyo ah innaga oo hareeraha ka wada taagan, islamarkaana ugu qabsoomi lahayd si xor iyo cadaalad ah.
Waxaa hubaal ah inay tahay doorasho maanta caalamka innagu eegayo sida aynu uga dabbaalano, waana xaqiiqo in ay meeqaamkeenna kor u sii qaadii doonto oo la innoogu sed kordhin doono.
Haddaba maxaa Ina gudboon? Muwaadin waxaa waajib ku ah qof kasta oo Somalilander ah inuu fadhigii uga kaco oo ugu horeyn wax walba ka horeysiiyo ilaalinta nabadgelyada, Marka labaadna , u codeeyo xildhibaankii ku matali lahaa golaha deegaanka shanta sano ee soo socda iyo xisbigiisa ku matali lahaa siyaasadda tobanka sano ee soo socda.
Dhanka Xisbiyada iyo ururadana waxaa looga baahan yahay in ay danta qaranka ka horeysiiyaan wax walba oo ay ku kalsoonaadaan nasiibkooda iyo calafkooda.
Midna ha la ogaado Mar kasta oo doorasho si nabad ah uga dhacdo Somaliland waa guul u soo hoyatey shacbiga , haseyeeshee waxa ay dhinaca kale cadowga ku tahay gantaal ku dhacey.
Sidaa awgeed, waxa aan Ilaahey ka baryeynaa in ay noqoto doorasho lagu liibaano, waxaanan leenahay GACAl KU ARAG ee muwaadin ku codee nabad, barbarkay ka baxdaana waa bakeyli qaleen.
Waxaan ku soo gunaanadaynaa qormadeenan halku dhigii ku jiray bandhig faneed abwaan Axmed Saleebaan Bidde sameeyay xiligii doorashadii Baarlamaanka ee 2005-tii oo ahayd “Carraddu Nabad Bay Rabtaa Codkaaga Xor baad u tahay”
Previous PostWasaaradda Caafimaadka Oo Kulan Soo Dhaweyn ah u samaysay Wefti Ka socday FinlandNext Post“Xisbiga cilaaq keena ee maxasta caqliga ka xada ee kiciyaa isagaa is riday”	Blog